प्रचण्डको पहलमा चितवनमा ४ अर्बका योजना, के–के हुँदैछन् विकास निर्माणका काम ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्डको पहलमा चितवनमा ४ अर्बका योजना, के–के हुँदैछन् विकास निर्माणका काम ?
चितवन, माघ २७ । सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृहजिल्लालाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न योजना पारेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा ३६ वटा महत्वपूर्ण योजना सञ्चालनमा छन् । करिब चार अर्ब रूपैयाँका ती योजनामध्ये धेरै दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा छन् । दाहाल चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा पनि यसैगरी योजना पारिएको छ । ओलीको निर्वाचन क्षेत्रसहित झापामा दर्जनौं ठूला योजना पारिएको छ ।
दाहाल चितवनबाट विजयी भएपछि उनी जिल्ला आउने क्रम मात्र बढेको छैन विकास योजना पनि ओइरिएका छन् । जिल्लामा उनको पहलमा पारिएका ३६ वटा महत्वपूर्ण योजनाको काम भइराखेको दाहालकी स्वकीय सचिव (चितवन क्षेत्र नम्बर ३)० निशा न्यौपाने बताउँछिन् । काम भइराखेका योजनामध्ये अधिकांश दाहालको निर्वाचन क्षेत्रका छन् । दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाका २९ मध्ये १९ वडा पर्छन् । त्यस्तै माडी नगरपालिका पनि क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्छ ।
याे पनि पढ्नुस दुर्लभ 'बाघ' हुन् प्रचण्ड, माछा जस्तो बल्छीमा पर्दैनन् !
पछिल्लोपटक माघ १७ गते चितवन आएर तीन फरकफरक कार्यक्रममा सहभागी भए दाहाल । यसै क्रममा उनले भरतपुरस्थित केन्द्रीय बस टर्मिनलमा कार्यक्रम गरेर पाँचवटा आयोजनाको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । रानीपोखरीमा पार्क तथा पूर्वाधार, लक्ष्मीनारायण तथा ओमकारेश्वर मन्दिर पार्क तथा पूर्वाधार, केन्द्रीय बस टर्मिनल परिसर निर्माण सुधार, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह तथा मलामी प्रतीक्षालय र भरतपुर अस्पतालमा कुरुवा घर एवं पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजनाको उनले शिलान्यास गरेका थिए । ४७ करोड ५७ लाख ३० हजार रूपैयाँबराबरका यी योजनाको काम दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ । यी पाँचमध्ये तीन योजना दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ अर्ब रूपैयाँको प्याकेज आयोजना पनि सञ्चालनमा रहेको स्वकीय सचिव न्यौपाने बताउँछिन् । ०७७ असार मसान्तमा सक्ने गरी १३ वटा सडक निर्माणको काम पनि प्याकेजअन्तर्गत भइरहेको जानकारी उनले दिइन् । महानगरीय रिङ रोड र लिंक रोडभित्र पर्ने सबै सडकमध्ये ११ वटा दाहालको निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । प्याकेजअन्तर्गत मंगलपुरबाट पार्वतीपुर हुँदै मेघौली जाने २१ किलोमिटर प्रचण्ड मार्गको केही भाग पनि पर्छ । दाहाल माओवादी सशस्त्र युद्धकालमा प्रचण्डका नामले चिनिन्थे ।
याे पनि पढ्नुस इरानी राजदूतद्वारा अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता, के भयो कुराकानी?
सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत दाहालकै निर्वाचन क्षेत्रमा ३८ करोड ३५ लाख रूपैयाँका विभिन्न ७ वटा योजनासमेत निर्माणका क्रममा छन् । ०७६ असार मसान्तभित्र सक्ने गरी काम थालिएका योजनामा ६ वटा सडक निर्माण र एउटा पार्क निर्माण छ । दाहालकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने माडी नगरपालिकाको प्रमुख सडकमा ९ स्थानमा पुल निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियसमेत अघि बढाइएको छ । ६४ करोड ११ लाख ३५ हजार रूपैयाँको लागतमा बन्ने ती पुलको प्रक्रियागत काम सुरु भइसकेको जानकारी न्यौपानेले दिइन् । पतरी, रिमाल, बाँदरमुढे, बगई, मुगई, परवी, धाँगर, टुनामुना र रिउ खोलामा पुल निर्माण गर्ने योजना छ । यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी फागुनमा शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिइन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउने घोषणा गरेकोे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र सिटी हलको काम पनि दाहालकै पहलमा अघि बढेको उनी बताउँछिन् । दाहालकै निर्वाचन क्षेत्रमा सो रंगशाला बनाउने भनिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड भन्छन्, ‘नेपालमा दश वर्षमा आर्थिक क्रान्तिको परिणाम सजिलै देख्न सकिने छ’ [भिडियो]
हुलाकी मार्गअन्तर्गतको जगतपुर खण्डका लागि १० करोड ७२ लाख र माडी खण्डका लागि २१ करोड १७ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको पनि उनले बताइन् । उनका अनुसार दाहालकै पहलमा भरतपुर पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको सडकलाई छ लेनको बनाउन डिपिआर तयार हुँदै गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा दाहालको निर्वाचन क्षेत्रका १३ वटा स्कुलमा एकदेखि चार कोठे भवन निर्माण गर्न २ करोड १० लाख रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक, भरतपुर महानगरपालिका रिङ रोडको डिपिआर तयार, माडी नगरपालिकामा पर्ने बाल्मीकि आश्रम जोड्ने झोलुंगे पुल निर्माण योजना पनि अघि सारिएको छ ।
मेघौलीको साझापुर माविलाई डिजिटल आइटी सिस्टममा लैजाने, महानगरपालिकामा ढल प्रशोधन योजना सञ्चालन प्रक्रिाया पनि अघि बढाइएको स्वकीय सचिव न्यौपानेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चितवन, नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने पुल देवघाटमा बनाउन पनि अध्ययन अघि बढाइएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।